Naya Post Nepal | इन्धनको मूल्य फेरि बढ्यो, प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले वृद्धि
इन्धनको मूल्य फेरि बढ्यो, प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। शनिबार रातिदेखि लागु हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य लिटरमा ३ रुपैयाँले बढाइएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले बताए ।
यसअघि माघ १८ गते निगमले मूल्य बढाएको थियो । नयाँ मूल्यवृद्धिपछि अब पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १४५ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १२८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीकाअनुसार शनिबार रातिदेखि लागु भएको पेट्रोल,डिजेल र मट्टितेलकाे मूल्य हालसम्मकै उच्च हाे ।
अन्य समाचार / भक्तपुर । प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान पाँच दलीय स’त्तारुढ गठबन्धनलाई अ’शुभ गिद्धको सं’ज्ञा दिएका छन् । शनिबार लोकतन्त्र दिवसको अ’वसरमा सूर्य वि’नायक नगर अस्पतालको उ’द्घाटन कार्यक्रममा सह’भागी भएका ओलीले
ग’ठबन्धनलाई अ’शुभ गि’द्धकाे सं’ज्ञा दिँदै देशको हालत बि’ग्रिएकाे आ’रोप लगाए । उनले भने, ‘धुरीमा एउटै गिद्ध बस्यो भने अशुभ मा निन्छ । एउटै गि’द्ध बस्दा पनि अ’शुभ मानिन्छ । पाँच÷पाँचवटा गि द्ध बस्यो भने के हुन्छ । देशको हा’लत त्यस्तै भएको छ ।
बजेट काट्ने, अस्पताल काट्ने थ’प्ने त यिनीहरु गर्दै गर्दैनन् । कुनै डा क्टरले राम्रो काम गर्यो लखेटिहाल्ने, कुनै प्र’शासकले राम्रो काम ग र्यो ल’खेटिहा’ल्ने, कुनै प्रहरीले ड्युटी राम्रो गर्यो भने लखेटिहाल्ने । यो उनीहरुको मति हो तर, चिन्ता मान्नुपर्दैन किनभने देशमा लोक तन्त्र, प्रजातन्त्र आएको छ । जा’लझे’ल गरे पनि त्यो गर्न सक्दैनन् ।’
यसअघि एमाले सरकारले राम्रो गरेका कामहरु देखि नसकेर सरकार ढालेको पनि उनले आरोप लगाए । ‘आज अगतिलो स’रकार बनेको छ । अगतिलो सरकार बनेपनि गतिलो सरकार बन्न सक्छ । किनकि हामीले लोक’तान्त्रिक प्रणाली ल्या’एका छौँ ।
प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु चु’पो लागेर बस्दैनन्, पराजय सहदैनन् तर, तिनीहरुले स’त्ता पाए पनि रा्रमो गर्न सक्दैनन् । नेकपा एमालेको सरकार ढाले, एमालेले राम्रो गरेको देखेर त्रासले सरकार ढाले । उनी हरुले राम्रो काम ग’र्नुपथ्र्यो नि । राम्रो काम गर्नु छैन,’ उनले भने ।
मन्तव्यको बीचमा गठबन्धन पानीमुनि नै गए पनि ठेगान लगाएरै छा ड्ने उनले बताए । साथै, यो गठबन्धनको सरकार १ वर्षभन्दा बढी नचल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘यो गठबन्धनलाई पानीमुनिबाट भए पनि ठेगान ल’गाइन्छ, लगाइन्छ ।
बच्ला पानीमुनि गएपनि कहाँ यो स्वार्थी गठ’बन्धन ? यो कहाँ बच्छ ? बच्न सक्दैन । बढीमा एक वर्ष हो यसको आ’यु । संसारभरिका ज्यो’तिषिलाई सो’ध्यो भन्यो पनि त्यै भन्छन् बढीमा १ वर्ष हो यो सर कारको आ’यु,’ उनले भने ।
२०७८ फाल्गुन ७, शनिबार प्रकाशित0Minutes 628 Views